Njirimara na mkpa nke stratosphere | Netwọk Mgbasa Ozi
Njirimara na ịdị mkpa nke stratosphere
Anyị ikuku nwere dị iche iche nke enwere gas di iche iche di iche iche. Uzo ọ bụla nke ikuku nwere ọrụ ya na njirimara nke ya nke mere ka ọ dị iche na ndị ọzọ.
Anyị nwere Ulo elu nke bụ oyi akwa nke ikuku anyị bi na ya na ihe niile gbasara ihu igwe na-ewere ọnọdụ, stratosphere nke bụ oyi akwa nke ikuku nke ozone oyi akwa dị, mesosphere ebe ọkụ ugwu na-eme na okpomọkụ nke ahụ na-agafe na mbara elu na ebe okpomọkụ dị oke elu. Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na stratosphere na mkpa ọ dị maka ndụ na ụwa anyị.
1 Njirimara Stratosphere
2 Na ozone oyi akwa
4 Mmetụta nke ụgbọ elu na stratosphere
5 Stratosphere ịmata
Na stratosphere bụ na a elu nke ihe dị ka 10-15 km dị elu ma gbasaa ruo ihe dịka 45-50 km. Ọnọdụ okpomọkụ dị na stratosphere dịgasị iche iche dị ka ndị a: nke mbụ, ọ na-amalite ịdị na-adịgide adịgide (ebe ọ bụ na a hụrụ ya na elu dị nso na tropopause ebe ọnọdụ okpomọkụ na-adị otu) ma dịkwa ala. Ka anyị na-abawanye elu, ọnọdụ okpomọkụ nke stratosphere na-abawanye, ebe ọ na-amịkọrọ ụzarị ọkụ nke igwe. Omume nke okpomọkụ na troposphere na-arụ ọrụ megidere ihe troposphere nke anyị bi na ya na-eme, ya bụ, kama ịbelata na ịdị elu, ọ na-abawanye.
Na stratosphere enweghi ike ije ọ bụla nke ikuku, mana ikuku ikuku nwere ike iru 200 km / h. Nsogbu nke ikuku a bu na ihe ọ bụla nke ruru stratosphere na-agbasa na ụwa niile. Otu ihe atụ nke ndị a bụ ndị CFC. Ikuku ndị a nke chlorine na fluorine mejupụtara na-ebibi ozone oyi akwa ma gbasaa na mbara ụwa n'ihi ikuku siri ike sitere na stratosphere.
O nweghi igwe ojii ma ọ bụ usoro ihu igwe ndị ọzọ na stratosphere. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-agbagọke mmụba nke okpomoku nke ịdị nso nke Sunto.Ọ bụ ihe ezi uche dị na iche na ịbịaru Sun nso nso, ọ ga-adị ọkụ karị Otú ọ dị, nke a abụghị ikpe maka nke ahụ. Na stratosphere anyị nwere ike izute akwa ozone a ma ama. Ozone oyi akwa abụghị n'onwe ya "oyi akwa", mana ọ bụ mpaghara ikuku nke ikuku gas a dị elu karịa nke ikuku ndị ọzọ. Okpukpo ozone bu ndi na-aru oru radieshon nke biara na Anyanwu ma nye anyi ndu n’elu uwa. Mkpụrụ ndụ ndị a nke na-amịkọrọ ụzarị ultraviolet anyanwụ na-eme ka ike ahụ ghọọ okpomọkụ, ya mere, ọ bụ ya mere okpomọkụ nke stratosphere ji abawanye n'ịdị elu.
N'ihi na enwere ihe tropopause nke ikuku kwụsiri ike na enweghị ikuku mmiri, mgbanwe nke ihe dị n'etiti troposphere na stratosphere fọrọ nke nta ka efu. N'ihi nke a, enweghi oke alụlụ mmiri ọ bụla na stratosphere. Nke a pụtara na igwe ojii na stratosphere naanị na-etolite ma ọ bụrụ na ọ bụ oyi nke na obere mmiri dị ugbu a na-ekpokọta ma mepụta kristal akpụrụ akpụ. A na-akpọ ha igwe ojii kristal ojii na anaghị ebute ọdịda.
Na njedebe nke stratosphere bụ stratopause. Ọ bụ mpaghara ikuku ebe elu ozone ndọta na-akwụsị ma ọnọdụ okpomọkụ na-adịgide adịgide (ihe dị ka ogo 0 centigrade). Stratopause bu nke n’enye uzo.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, naanị ogige kemịkal nwere ogologo ndụ bụ ndị nwere ike iru stratosphere. Ugbu a ee, ozugbo ha ruru ebe ahụ, ha nwere ike ịnọ ogologo oge. Dịka ọmụmaatụ, ihe ndị nnukwu ugwu mgbawa na-ewepụta nwere ike ịnọ na stratosphere ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ.
Na ozone oyi akwa
Na ozone oyi akwa anaghị enwe otu mgbakọ nke gas a mgbe niile dị anya na ya. Na stratosphere, nhazi na mbibi ozone nke ozone na eme n’otu oge. Ka ozone na-etolite, ụzarị anyanwụ ga-agbaji irighiri ikuku oxygen (O2) n'ime atọm oxygen abụọ (O). Otu n'ime atọm ndị a mgbe ha na-ezute ikuku oxygen ọzọ na-emeghachi omume iji mepụta ozone (O3).
Nke a bụ etu esi akpụpụta mkpụrụ ndụ ozone. Otú ọ dị, ndammana, dika e kere ha, site na radieshon nke anyanwụ ka ebibiri ha. Rayszarị ọkụ sitere na Sun na-ada na ozone molecule ma bibie ya ọzọ ka o wee nweta ikuku oxygen (O2) na oxygen atom (O). Ugbu a oxygen atom na-emeghachi omume na molekul ozone ọzọ iji mepụta ụmụ irighiri oxygen abụọ, wdg. Ọ bụ usoro okike nke dị na nhazi na mbibi nke mkpụrụ ndụ ozone. N'ụzọ dị otú a, oyi akwa a nke ikuku nwere ike ịmị ọkụ buru ibu nke ụzarị ultraviolet na-emerụ ahụ ma chebe anyị.
Nke a bụ ikpe kemgbe ogologo oge. Oge okirikiri ebe a na-edebe ozone ịta ahụhụ dị ka ihe na-adịgide adịgide ma na-agbanwe oge. Agbanyeghị, enwere ụzọ ọzọ iji bibie ozone na ikuku. Chlorofluorocarbons (CFCs) ha kwụsiri ike na ikuku ma nwee ike iru stratosphere. Ikuku ndị a nwere ogologo ndụ, mana mgbe ha ruru stratosphere, ụzarị ọkụ nke sitere na Anyanwụ na-ebibi ụmụ irighiri ihe ndị ahụ, na-eme ka ihe ndị na-eme chlorine na-arụ ọrụ. Ihe ndị a na-eme ka mmiri na-ebibi mkpụrụ ndụ ozone, yabụ oke ozone a na-ebibi na mkpokọta buru ibu karịa nke emepụtara. N’ụzọ dị otu a, emebi nguzo n’etiti ọgbọ na nbibi nke ụmụ irighiri ozone nwere ike ịmịkọrọ radieshon nke na - emerụ anyị ahụ.
O bu ihe nwute, n'oge gara aga amaghi isi okwu a n'uzo di otua, ya mere na oru mmadu (ojiji nke chlorofluorocarbon aerosols) ha jisiri ike iru uzo nnukwu chlorine na bromine na-ebibi mkpụrụ ndụ ozone. Ebe ọ bụ na mmeghachi omume chọrọ ìhè na nguzo nke igwe ojii na okpomọkụ dị oke ala, ọkwa ozone kachasị ala na-eme n'oge opupu ihe ubi nke Antarctica na oghere ozone na-etolite Antarctica. Oghere ozone ndị a na-eme ka ikuku ultraviolet ndị ọzọ rute n’elu ụwa ma mee ka nzube ya mezie ngwa ngwa.
N'ime mmadu, mmebi nke ozone oyi akwa emeela ka mmụba nke ọrịa kansa akpụkpọ anụ n'ihi ọnụọgụ dị ukwuu nke radieshon nke anyanwụ ruru anyị. A na-emetụtakwa ihe ọkụkụ, ọkachasị ndị na-eto eto ma nwekwa ume na obere osisi na epupụta.
Mmetụta nke ụgbọ elu na stratosphere
Plangbọ elu enweela mmetụta na stratosphere, n'ihi na ha na-efekarị n'ogo dị n'agbata kilomita 10 na 12, ya bụ, nso tropopause na mmalite nke stratosphere. Dika ugbo elu ikuku toro, umu anwuru nke carbon dioxide (CO2), vapo mmiri (H2O), nitrogen oxides (NOx), sọlfọ oxides (SOx) na soot abawanyela na ikuku di n'etiti elu troposphere na obere stratosphere.
Taa, ụgbọ elu na-ebute naanị 2 na 3% nke ikuku ọkụ ụwa. Nke a abụghịkwa ihe dị oke mkpa gbasara usoro okpomoku ụwa. Agbanyeghị, ihe dị mkpa n'ezie gbasara ụgbọ elu bụ gas ndị ha na-ewepụta na-eme nke a n'akụkụ elu nke troposphere. Nke a na - eme ka alụlụ mmiri na - eme ka mmiri nwee ume iji mepụta igwe ojii cirrus nke na - ejigide okpomọkụ n’elu ụwa ma na - enye aka na okpomoku ụwa.
N’aka nke ọzọ, nitrogen oxides nke ụgbọ elu na-ewepụ dịkwa egwu, ebe ọ bụ na ha metụtara mkpochapụ nke ozone na stratosphere. Anyi aghaghi iche na obu ezie na ahihia ahihia nke ugbo elu na ewepu enweghi ogologo ndu iru uzo, ha nwere ike ime ya, nihi na a hapuru ha n'ebe di ezigbo nso.
Uzo a nke ikuku nwere ihe ichoro iju anyi anya. Otu n'ime ndị ịmata bụ:
Njupụta ikuku dị 10% ala na elu ụwa
Okpomoku di na ala di gburugburu -56 degrees na nkezi na ikuku na-eru 200 kilomita kwa awa.
Enwere akụkọ na-egosi ịdị adị nke obere microorganisms bi na stratosphere. A kwenyere na ụmụ nje a sitere na mbara igwe. Ha bụ nje na-efe efe, ihe ndị na-eguzogide ọgwụ nke nwere ike ịme mkpuchi gburugburu ha ma wee lanarị obere okpomọkụ, ọnọdụ akọrọ na ọkwa dị elu nke radieshon dị na stratosphere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ikuku nwere nnukwu ọrụ maka anyị na ndị ọzọ dị ndụ bi na mbara ụwa anyị. Stratosphere nwere ihe dị mkpa maka nlanarị anyị yana, ọ bụ ezie na ọ dị elu kilomita, anyị ga-echedo ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Njirimara na ịdị mkpa nke stratosphere
Ntọala nke Larsen C ngọngọ na Antarctica dị nso
74% nke ndị bi n'ụwa nwere ike igosi na ebili mmiri na-egbu egbu site na 2100